शोभाकान्त जेल चलान भएपछि अर्थमन्त्री पौडेल आक्रोशित - नेपालबहस
शोभाकान्त जेल चलान भएपछि अर्थमन्त्री पौडेल आक्रोशित
| १४:२६:०८ मा प्रकाशित
२९ माघ, काठमाडौं । केपी ओली सरकारका प्रभावशाली मन्त्री विष्णु पौडेल पछिल्लो अवस्थामा असन्तुष्ट देखिएका छन् । राजनीतिक रुपमा कमजोर धरातल रहेका ओलीलाई साथ र समर्थन गरिरहेका पौडेल आफ्नै गुटमा कमजोर भएपछि उनको असन्तुष्टी चुलिएको हो । स्रोतका अनुसार, ओली समूहमा पौडेललाई कमजोर बनाउन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लागिपरेका छन् ।
यो श्रृँखलाको पछिल्लो कडी बनेको छ – ललितानिवास काण्डका नाइके डा.शोभाकान्त ढकालको जेल चलान । अर्थमन्त्री पौडेलका विश्वासपात्र ढकाललाई विशेष अदालतले हिजो पुुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । ढकाल थुनामा परेपछि अर्थमन्त्री चिढिएका छन्, अझ मुख्यमन्त्री पोखरेलकै दवावमा विशेष अदालतले थुनामा पठाइएको जानकारी पाएपछि पौडेल आगो भएका हुन्–स्रोतको भनाई छ ।
ओलीलाई अफ्ठेरो पर्दा सधैं ढाल भएर उभिएका पौडेल आफ्ना मानिसको सुरक्षा गर्न नसक्ने भएपछि बढी आक्रोशित भएको निकट स्रोतको भनाई छ । ललितानिवास प्रकरणका मुुख्यनाइकेका रुपमा रहेका बिचौलिया ढकाललाई हिजो विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बिक्री गरेको आरोपमा थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।
उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातपनि यही प्रकरणमा थुनामा रहेका छन् । मुख्य अभियुक्तका रुपमा अख्तियारले ढकाललाई प्रस्तुत गरेको छ । ढकालबिरुद्ध ३९ करोड २८ लाख विगो मागसहित विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको थियो । उक्त मुद्धाको सुनुवाई गर्ने न्यायाधीशहरु अब्दुल अजिज मुसलमान, बालेन्द्र रुपाखेती र चन्द्र सारु मगरले हिजो ढकाललाई थुनामा पढाउने आदेश गरेका थिए ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बिक्री गरेको आरोपमा ढकाललगायत धेरैजनाविरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको छ । ढकालले अर्थमन्त्री पौडेललाई समेत सोही जग्गाबाट आठ आना उपलव्ध गराएका थिए । पौडेलका छोरा नवीन ढकालको नाममा रहेको सो जग्गा पछि सरकारलाई फिर्ता गर्ने शर्तमा उनी कारबाहीको दायरा बाहिर रहन सफल भएका छन् ।
तर ढकालबाट पौडेलले धेरै आर्थिक लाभ लिएको बताइने गरेको छ । त्यसको गुन तिर्न नसक्दा अहिले पौडेल विचलित भएको स्रोतको भनाई छ । ओलीलाई अफ्ठेरो पर्दा सधैं साथ दिएपछि शंकर पोखरेल हावी भएको भन्दै उनले दुखेसो पोख्ने गरेको बताइएको छ ।
यो प्रकरणले गर्दा पौडेल ओली क्याम्पबाट विद्रोह गर्नसक्ने स्थितिमा रहेको स्रोतको भनाई छ । अर्थमन्त्रीले कुनैपनि बेला ओली क्याम्प छाड्न सक्ने देखिएको छ– स्रोत भन्छ । यसबारे प्रचण्ड–माधव समूहसँग पौडेलको छलफल चलिरहेको दावी स्रोतको रहेको छ ।
कुनैपनि बेला पौडेलले क्याम्प परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्दै स्रोतले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कुरा मात्रै सुनुवाई हुने हो भने पौडेल लामो समय ओलीसँग सँगै बस्न नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेकपा विभाजनः अध्यादेश ल्याउने कि संसदमै सामाना गर्ने ? १७ घण्टा पहिले
तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन : मुख्यमन्त्री राई २ दिन पहिले
नाम मात्रको यातायात व्यवस्था कार्यालय ९ मिनेट पहिले
अभियानकर्ताले दिए काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि धर्ना १० मिनेट पहिले
नेकपा नेता पन्तविरुद्ध कोमल वली अदालत जाने २४ मिनेट पहिले
नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्ने आइसिसी विश्वकप लिग-२ का बाँकी खेल प्रत्यक्ष प्रसारण हुने ३० मिनेट पहिले
बालबालिकाको गुनासोलाई प्राथमीकता दिदै विद्यालयमा गुनासो पेटिका ३६ मिनेट पहिले
सोमबारदेखि केरुङ नाका पुनःसञ्चालन हुने ४१ मिनेट पहिले
चन्द्रागिरी हिल्सको शेयरमूल्य ९.८१५ बढ्यो, खरीद चाप उच्च ४७ मिनेट पहिले
ओली अरुको आलोचना सुन्न नसक्ने : प्रचण्ड २४ घण्टा पहिले
सेनाले सञ्चालन गरेको शिविरमा ५८२ जनाको स्वास्थ्य उपचार ४ घण्टा पहिले
प्रयोगविहीन बन्दै अनुदानका उपकरणहरु ४ दिन पहिले
पर्सामा निःशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न ४ दिन पहिले
घटेको बजारमा आधा दर्जन कम्पनीको शेयरमूल्य सर्किट लेभलमा, निफ्राको बढोत्तरी कायमै ६ दिन पहिले
सुनसरी र चितवनमा सवारी दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु २ हप्ता पहिले
भारतमा कतिले लगाए कोभिड-१९ विरुद्धको खोप ? ३ हप्ता पहिले
मध्यविन्दुले बेरोजगार युवालाई तीन कराेड सहुलियत ऋण दिने ३ हप्ता पहिले
नेतृ सुकी निवासमै नजरबन्दमा ३ हप्ता पहिले
यमन आक्रमण “आत्मरक्षा” का लागि गरिएको हो – युएई २ वर्ष पहिले
घरेलु मदिरा बनाउने १४ जना पक्राउ ११ महिना पहिले
म्यानमारमा पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ११३ पुग्यो ८ महिना पहिले
कोरोनाको त्रासकाबीच नियमित खोप सेवा शुरु १० महिना पहिले